Maitiro Ekutema Yako Blog Traffic muhafu | Martech Zone
Chipiri, February 24, 2009 Svondo, July 27, 2014 Douglas Karr
Ini handifungire munhu vangazoda kucheka traffic yavo muhafu pane yavo blog. Nekudaro, yakajairika muyero pamwe neangu manhamba uye inoisa zvakati wandei kumanikidza pane yangu kublogi mazuva ese.
Kana ndikaramba ndichi blog nguva dzose, traffic yangu inokura - pamwe vangangoita zana vashanyi pazuva pazuva pamwedzi Nekudaro, kana ndikasabloga kwezuva rimwe chete, traffic yangu inodonha nehafu. Vhiki rino rapfuura, ndanga ndakabatikana zvekuti ma link angu ezuva nezuva anga ari iwo akawanda ezvangu zvemukati - achitomanikidza shamwari yangu yakanaka kunyunyuta.
Ini handisi kubloga nekuda kwekushayikwa kwemukati, saka ini ndinongoda kuzvidzorera ndega mune yakanaka mutinhimira. Ini ndine matani eruzivo ekugovana pane irikufambira mberi muinternet kushambadzira tekinoroji - ini ndoda kuwana zvakanyanya kurangwa mune angu ekuburitsa mazuva ekupedzisira. Gara wakakomberedza, ndadzoka pakukwira!
Tags: Bloggingblogging traffickubatanidzwa bloggingdonha traffic
Matatu Matatu Ekushandisa Zvemukati Zvako
Kukadzi 24, 2009 na2: 51 PM
Ndinoda pachena pano. Ini ndinoshamisika kuti zvingave sei kana stats dzaitaridzwa pane iyo peji nguva dzese.
Ini ndinofunga izvo zvinongoshanda chete pamapeji echigadzirwa uye ekudzokorora masosi achienzaniswa neyako blog. Ini ndinotevera vanhu nekuda kwemazano avo kwete avo stat. Asi zvingave zvinonakidza kuona kana vafambi vepamusoro vemotokari vari ivo vepfungwa yepamusoro vakomana.
Nhanho yakanaka yekupinda muchimiro. Ini chaizvo ndinonetseka nazvo.
Kukadzi 24, 2009 na5: 26 PM
Kupera kwevhiki kwakanaka kwakadonha ipapo. Chii chakaitika kumazuva apo vanhu vakafashura uye kuverenga zvakakosha zvekushambadzira blog zvinyorwa 24/7! Ini ndingafarire kuona kana izvo zvinoitika zvaienderana kwemwedzi yakati wandei yapfuura.
Kukadzi 24, 2009 na8: 58 PM
Ini ndinoona chinhu chimwe chete ichocho. Chinhu choga chandinogona kuita? Tora kutumira! 🙂
Jul 29, 2009 na6: 32 PM
Hmmm… ..Ichi chitsva chose, iwe unoda kucheka traffic pahafu.
Ndine bhurogu nyowani,
Ndinoda vanhu vazhinji mazuva ese,
Kana usine hanya nekuendesa vanhu kwandiri ..... :))